Soo dejisan Auslogics Disk Defrag 9.4.0.2 – Vessoft
WindowsNidaamkaDisks adagAuslogics Disk Defrag
Bogga rasmiga ah: Auslogics Disk Defrag
Nadiifinta Diiwaan Gelinta Auslogics – waa adeeg fudud oo nadaafadda looga nadiifiyo nidaamka faylasha aan loo baahnayn oo lagu saxo khaladaadka diiwaangelinta. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku eegto dhamaan dhibaatooyinka laga helay daaqada faahfaahinta.
Auslogics Driver Updater – waa aalad waxtar u leh soo dejinta darawalada isla markaana cusboonaysiinta kuwa hada jira. Softiweerka waxaa kujira mobiil lagu keydiyo laguna soo celiyo darawallada.
Faallo ku saabsan Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Defrag Xirfadaha la xiriira
Software-ka waxaa loogu talagalay in lagu soo magacaabo qaybo tiro badan oo faylasha isku mar ah. Software wuxuu si buuxda u bedeli karaa magaca feylka ama qaybtiisa shakhsiga ah.
Evernote – barnaamij softiweer ah oo lagu sameeyo liistada hawsha lana qorsheeyo howlaha maalinlaha ah. Codsigu wuxuu shaqada ku taageerayaa dukumiintiyada qaabab caan ah iyo waxa ku jira noocyo kala duwan.